IiSmartwatches ziqala ukuhlaziya ujongano olutsha lwe-Wear OS | I-Androidsis
Ekupheleni kuka-Agasti uGoogle wazisa ingxelo entsha ye-Wear OS, Inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza, ethe yazisa ujongano olutsha. Ungazibona zonke iinkcukacha malunga nayo apha. Ngolu tshintsho loyilo, inkampani inethemba lokunika amandla kwinkqubo yokusebenza, engazange igqibe ukuqala ukusukela oko yaziswa ekuqaleni konyaka.
Uyilo luhlaziyiwe kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ke inokunceda i-Wear OS iphumelele ngaphezulu kwabasebenzisi kwihlabathi liphela. Kwaye iiwotshi zokuqala ziqala ukufumana le interface intsha yenkqubo yokusebenza ngokusesikweni.
Kule mpelaveki sele beqalisile ukuhlaziya iiwotshi zokuqala. Emva kokuzisa le nguqulo intsha, kwaqinisekiswa ukuba zonke iiwotshi, ngaphandle kwamagama ambalwa, Baza kufumana uhlaziyo. Nangona ngemini yayo akukho mihla yanikwa ukwaziswa kwayo.
Ekugqibeleni usuku lufikile, kwaye iiwotshi zokuqala ziqala ukuhlaziywa kule nguqulo intsha ye-Wear OS. Ke baya kuthi ngokusesikweni bafumane ujongano olutsha lweewotshi ezisebenzayo. Olu luhlaziyo oluthi iyeza kwezi smartwatches ngohlobo lwe-OTA. Ke umsebenzisi akunyanzelekanga ukuba enze nantoni na, linda nje.
Akukho mihla ithile inikiweyo yokusungulwa ngokuxhomekeke kumazwe. Ke kubonakala ngathi iyakuba yinto eza kwenzeka kwezi ntsuku zimbalwa zizayo. Usenokuba sele uyifumene le OTA kwi-Wear OS, okanye uza kuyifumana kungekudala.
Kodwa kulungile ukubona ukuba iiwotshi ziyahlaziya. Siza kubona ukuba le nguqulo intsha ye-Wear OS yamkelwe kwaye ixabisiwe ngokuqinisekileyo ngabasebenzisi. Okwangoku, sisalinde iimodeli ezintsha ukuba zifike kunye nale nkqubo yokusebenza, ngakumbi ukubukela kwePixel kaGoogle, ecwangciselwe u-2019.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Unxibelelwano olutsha lwe-Wear OS luqala ukufikelela kwimilindo yokuqala
Sikhusela ntoni i-IP67 okanye isiqinisekiso se-IP68?
Zeziphi iintlobo zesenzwa zeminwe ezikhoyo kwi-Android